बिहान उठ्दा मेरो शरीरमा लुगा थिएन……. – List Khabar
Home / Uncategorized / बिहान उठ्दा मेरो शरीरमा लुगा थिएन…….
बिहान उठ्दा मेरो शरीरमा लुगा थिएन…….
admin December 11, 2021 Uncategorized, समाचार Leaveacomment 122 Views
चीनको इ-कमर्स कम्पनी अलिबाबाले आफ्ना धेरै कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । आफ्नै कम्पनीका एक कर्मचारीले आफूमाथि यौ’नको आरोप लगाएपछि यो निर्णय लिएको उनले बताए । हाल यस विषयमा जिनान सिटी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यौ’न उ’त्पी’डन जस्ता घटनाहरू सहने छैन, कम्पनीका प्रवक्ताले भने, अलिबाबा समूहले यौ’न दु’र्व्य’व’हार सहने छैन। यसका लागि शून्य सहनशीलताको नीति छ । हाम्रा सबै कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता हो।
चीनको सामाजिक प्लेटफर्म वेइबोमा महिलाको मुद्दा चलिरहेको छ। आफूमाथि दु’व्र्य’व’हारको घटना घटेपछि ती महिलाले आफू व्यापार भ्रमणमा रहेको बताएकी थिइन् । महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् कि उनको मालिकले उनलाई हङझाउस्थित अलिबाबाको मुख्य कार्यालयबाट करिब ९०० किलोमिटर टाढा रहेको जिनान सहरमा सर्न बा’ध्य पा’रे’की थिइन् ।
२७ गते साँझ भेटमा ग्राहकले चु’म्ब’न ग’रे’को महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् । । बिहान उठ्दा उनी होटलको कोठामा थिइन् । उनको शरीरमा कपडा थिएन । साँझ के भयो उसलाई याद थिएन। उनले सीसीटीभी फुटेज जाँच गर्दा साँझको समयमा उनको मालिक चार पटक कोठामा पसेको पाइयो ।
हाल प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो सँगै कम्पनीले आरोपितलाई कडा कारबाही गरेको छ ।
Previous पृथ्वीको वायुमण्डलमा भेटियो रहस्यमय भ्वाङ
Next स्पेनमा रहेको मेसीको होटल तत्काल भत्काउन अदालतको आदेश